Whiten My Teeth | Way Best inay Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn
Posts tagged "ilkahayga ku caddeeya aanu u caddayn"
Ma jiraa hab aad samayn karto si aad si ammaan ah u caddayn ilkaha? Ma aha oo dhan ee ugu wanaagsan ama la aamini karo. Maqaalkani waxa uu ka hadlayaa habab la xaqiijiyay ilkaha ammaan leh daryeelka iyo xasilloonaan.
Haddii aad ka cabanaya dareen xanjo ka strips laba-saac, waa in aad isku daydo in ay ka saarto strips ka dib 30 daqiiqo halkii. Iyadoo ay tahay lagama maarmaan in la codsado strips labada jeer maalintii 30 daqiiqo muddo ka badan laba toddobaad, ma ay joogaan sida ay u badan tahay in ay keeni dareen xanjo.
TALO! Takhtarkaaga ilkuhu wuxuu samayn karaa ilkaha caddeeyo la laser ah. Tani waxay noqon kartaa habka ugu dhaqsaha badan ay u ilka dhabarkaaga noqon in ay midab cad bilowga ah.
Tani waxay aad u baahan tahay si ay u booqdaan dhakhtarka ilkaha iyo natiijooyinka yihiin labaad in midkoodna. Ilkaha siin karaan habab si caddeeya aanu u caddayn ilkaha in uu noqon doono mid aad u halis u ah in ay isticmaalaan laypeople dukaanka.
Si loo ilaaliyo ilkaha cad, Waa in aad leedahay xirfad nadiifinta caadiga ah sameeyo. Qorsheyso booqasho dhakhtarka ilkaha lixdii biloodba mar, horseednimo samaynta ballantaada soo socda inta aad waxaa jira nadiifinta kasta. Waa inaad isku daydaa in ay sii ballan tan iyo caymisyada ugu daboosho nidaamka this.
TALO! Iska taxadar markii cunaya ama cabaya ka dib markii aad u caddayn ilkaha. ilkaha la caddeeyey waxaa laga baqaa in ay Wasaqda.
Laser ilko caddeeyo waa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican marka ay timaado la caddeeyo dalabyo ilkaha aad. Tani waa hooskaaga ay markii hore ku jiray hal booqasho deg deg ah. Wakiilka bleaching A waxaa laga codsadaa in ilkaha, ka dibna ay toogteen la laser ah si aad u bilowdo. ilkaha The dhakhso waa by shan ama lix midabo.
Waxaa kugu dhici karo dareen ah in qaar ka mid ah ilkaha la caddeeyo waxyaabaha. In kastoo waxaa laga yaabaa in xaalad ku meel gaadh ah, weli dhaawici kara. Haddii aad isku aragto xanuun this, joojiso isticmaalka sheyga iyo arko dhakhtarka ilkaha sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodid. Takhtarkaaga ilkuhu wuxuu ku siin karaan waxyaabaha kala duwan ama xal si ay u caawiyaan caddeeya aanu u caddayn ilkaha hab aan xanuun lahayn.
TALO! Add baking soda in ilkaha joogtada ah cadayashada. soda Banking waa habka ugu wanaagsan ee wax ku ool ah oo si dabiici ah ilkaha u caddayn.
kiimikada ee dhan alaabta, kuwaas oo si joogto ah jebiyo more by lagala kulmo si ilkaha. Saamaynta hadal haynta saaraysaa burush farta waxa hubineysaa in ilkaha waa nadiifsan tihiin.
Jordgubbe yihiin daaweynta weyn dabiiciga ah ee ilkaha wasakheeyey. Habkani ayaa la caddeeyey in ay ka shaqeeyaan. Rumayso ama ha rumaysan, ku xoqeen ayay strawberry cut on ilkaha ah u caddayn karin. Ha intiisa kale berry ee agagaarka shan daqiiqo on ilkaha si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican ee suurto gal ah daaweynta.
TALO! Haddii aad isticmaalayso wax ilig-caddeeyo, joojin isla markiiba haddii cuncun kasta oo uu yeesho. dareen The noqon karaa calaamad u tahay in aad wax yeesho ilkaha.
Waxaad dhab ahaan waa in ilkaha tagaan ka hor inta aan la caddeeyo ilkaha haddii aad qabto godadka la daaweyn ama la ildaran cudurka ciridka. Waa in aad is ogow dheeraad ah marka la caddeeyo ilkaha. Takhtarkaaga ilkuhu wuxuu kuu sheegi kara heli istiraatiijiyad oo ku jira kuwa ugu wax ku ool ah oo ammaan ah inaad saasoo kale yeeshaan noqon doonaa.
Waxaa laga yaabaa in aad rabtid in aad xirfadle u caddayn ilkaha haddii aad raadinayso natiijada degdeg ah ama aad qabto xayd aad u xun. Habkani kharash yar oo dheeraad ah, laakiin si fiican u caddayn karin ilkaha iyo wuxuu noqon karaa mid ka dhaqso badan habab kale oo la caddeeyo.
TALO! Haddii aad sigaar ka dibna waxa ugu horeeya ee aad samayn lahaydeen oo waa sigaarka joojiyo. Haddii aad sigaar cabto, caddeeya aanu u caddayn ilkaha, ka dibna la sii wado si ay u iftiimin ilaa, aad nadiifiyo lacagtaada iska.
Strips in caddeeya aanu u caddayn ilkahoodu yihiin aan qaali ahayn oo waa heer sare ah oo la awoodi karo. strips Kuwani waxaa lagu dhejiyay on ilkaha. strips caddeeyo riyaaqay xowli ah gaaban ku caan, ay sabab u tahay wax ka yar kaamil ah natiijooyinka.
Haddii aad qabto in aad cabto cabitaanka oo keeni karo xayd, iyaga dabagal biyo. Tani waxay ilkaha ka hortagi kara ka qaadista wasakheeyey. Ikhtiyaar kale waa in aad cabto, kuwaas oo geey, ama isticmaal caanaha non-skim la kafeega.
TALO! Ka dib markii la caddeeyo ilkaha, codsan Vaseline inaan idin xusuusiyo in ay sii dhoola. Inkasta oo ay dhici karta in aanay fursad u tastiest, jelly petrolatum soo dhisi doono difaaca a, daahan ku meel gaar ah in looga hortago doonaa xayd.
Iska ilaali off luqluqasho shelf ah, gaar ahaan haddii ay jiraan waa midabka daray. Luqluqasho dhab keeni kartaa ilkaha si uu u noqdo more discolored. Sidoo kale, badan oo iyaga ka mid ah waxay leeyihiin sida khamriga qayb ah oo ka dhigi kara carrabka iyo ciridka xasaasi ah, iyo sidoo kale helitaanka galay dhiigga.
TALO! Waxaad noqon doontaa kalsooni badan oo ku saabsan dhoolla haddii aad tahay kalsooni badan oo ku saabsan neefta. Lick danbe ee gacanta nadiif ah si loo go'aamiyo haddii aad leedahay neefta xun.
saliidda qumbaha Organic waa wakiilka ah caddeeyo ilkaha. Waayo, 10 daqiiqo maalintii, isku day inaad ku mayrin saliidda qumbaha ugu yaraan 10 daqiiqo maalin kasta. Ka dib markii ku dhawaad 10 daqiiqo, afkaaga baxay iyo burush raaci sida aad sida caadiga ah ay doonaynin. tahay in aad arki doonaa natiijada dhawr maalmood ka dib.
Ogow waxa aad ilko caddeeyo habka la doonayo inuu kuu sameeyo. Haddii aad qabto hadafyada waaqici ah oo ku saabsan waxyaabaha ay tahay in aad isticmaasho, ilaa aad dabaylaha laga yaabaa in niyad la isakaga ee ilkaha. Ka fikir arrimo ku lug leh, sida da'da, iyo heerka uu gaarsiisan yahay Wasaqda iyo discolorations on ilkahaaga. Waydii dhakhtarkaaga ilkaha waxa ay ka sugayaan.
TALO! Cunista dhir cusub ama cilantro kaa caawin kara inaad iftiimin dhoolla. Kuwani dhalatada dabiiciga ah waxaa ka mid ah guryaha in gargaarayn in neutralizing bakteeriyada Xumaan-keenaya.
Caday ilkaha ka dib cunista waa qayb muhiim ah oo lagu hayo iyaga oo dhalaalaya iyo dhaldhalaalaan. Tani waxay si gaar ah muhiim marka aad la cabbo qaxwaha.
Qurub cunto Dark keeni kartaa afkaaga inuu jebiyo muddo. Iska ilaali Wasaqda kuwan by cunista ah xanjo free sonkorta ka dib cuntada. Tani fujiyo doonaa wax kasta oo qayb ka cunto oo ka xayd ilkaha sii.
TALO! Ku dar findhicilashada caadiga ah ee joogtada ah maalin kasta. Tani waxay kaa caawin kartaa in laga takhaluso aad huurada in discolor kartaa ilkaha.
Jordgubbe waa hab fudud oo dabiici ah iftiimin ilkaha ka muuqan caddaan. Jordgubbe waxay ka muujiyeen karaa natiijooyinka sida saamayn aad u wanaagsan ku caddeeyo daawaynta ilkaha. U ogolow strawberry si ay u sii on your ilkaha ugu yaraan shan daqiiqo natiijo wanaagsan.
Haddii aad rabto in aad ilkahaaga in ay caddaan, ha u Cunina liinta ama midhaha kale ee liinta. Sidoo kale isku day inaadan la cabbo Casiir ay. acids ee cuntooyinka kuwanu cunaan doonaa at ilkaha. Sidoo kale, waxaa la xaqiijiyay in noocan ah miro iyo juice kordhiyaa fursad u reflux acid haddii wada baabbe'een ka hor inta sariirta, taas oo iyana sidoo kale saamayn ku dhoolla. Sidaa darteed, isku day in aad si gaar ah looga fogaado kuwan Cuntooyinka iyo miirka habeenkii.
TALO! Ku dar waxyaabaha caanaha ka badan in aad cunto. Strong, ilko caafimaad ayaa loo saarin karaa in ay nafaqo ee cuntada sida yogurt, caano iyo jiis.
Waxaad heli kartaa kaahiniin ah caddeeyo guriga la haydarojiin iyo baking soda. Isticmaal isku dar si aad ilkaha ilaa iyo toban daqiiqo ay dhibtu. Ka taxaddar sida ay u adag in aad cadaydo, sida ay keeni kartaa cuncun xanjo.
Habka A fudud ilkaha caddaan waa in ay isku daraan cusbo miiska la liin. Ka dhig ey isku weel kasta oo xidhay, si aad u isticmaali kartaa inta badan iyo waxay dhif dhici doonaa.
TALO! Cabitaanka iyada oo kale caws buu u caawin karaa kahortagga Wasaqda ilkaha. By la cabbo iyada oo kale caws buu a, aad loo yareeyo waqtiga in ilkaha loo bandhigi dareeraha.
Bakteeriyada kori doono ku dhawaad ​​afkaaga ka dib waxa aad cuni. Haddii ilkahaaga aan la nadiifin, bakteeriyada waxay keeni kartaa badan oo dhibaatooyin, si xasuuso inaad iyaga cadaydo.
Qaado caleemaha bay la qalajiyey iyo qolofka orange qalajiyey iyo iyaga qaawi galay budo. Add sayrin ah biyaha tuubada si budada, iyo waxa ay isla dhigi doonaa cadayga ah ilkaha dabiiciga ah caddeeyo. Tani ayaa sidoo kale laga helay hortago arrimaha kale ee la xiriira ilkaha.
TALO! Miraha waxa loo isticmaali karaa sida weyn a, dabiiciga ah, Hab ammaan ah u caddayn ilkaha. Jordgubbe shaqeeyaan si gaar ah iyo sidoo kale ujeedada this.
Haddii baakidh ma fiican ilkaha, kiimikada ka gel ku caddeeyo kaydkii kartaa keentay in xanjo cuncun.
daawooyinka dabiiciga ah Qaar ka mid ah ka caawin doonaa ilkaha caddeeya, sida khal cider tufaax. Waxaa la og yahay in ay ka nadiifisaan ilkaha iyo ka saari Wasaqda halka ay ka saareen bakteeriyada afkaaga. Isku day isdhaqin khal ku saabsan hal mar maalin ka hor aad cadaydo ilkahaaga.
Your dhoola eegi doonaa dhalaal. Isku day inaad la isticmaalayo midabka dibinta la lipstick lagu eego buluug ah ku salaysan ama isticmaal gloss dibinta. Colors in ay yihiin casaan iyo buluug-tined ama berry caawin ilkaha ka muuqan caddaan. ka alaabta dibinta matte dheerow sida ay keeni kartaa ilkaha.
biyo la cabo ka dib gubaya sharaabka in jebiyo ilkaha u sii heli karaa ilkaha. luqluqdo biyo A ka hortagtaa Xumaan ku keenaya cabniinka ka setting.You ka cabbi karaa iyada oo kale caws buu a.
Samee qaarkood in aad cadaydo, xasawda, iyo sida loo isticmaalo massage xanjo ah ugu yaraan laba jeer maalintii. Habka ugu mug leh si loo hubiyo in ilkaha waa in la cadaydo iyo xadhigga mar kasta oo aad wax cunin ama cabin. Sidaas waxaad yaqiinsanaysaa in laga takhaluso haraaga cuntada iyo huurada in laga yaabo inuu xayd ilkaha.
strawberry Jinka kaa caawin kara ilko caddeeya. Mash strawberries cusub galay, Jinka ah, ka dibna codsan isku dar ah in ilkaha. ee la soo dhaafay strawberry wuxuu ka dhigi doonaa ilkaha noqon caddaan aan baahida loo qabo in kiimikada adag. Habka guriga caddeeyo Tani waxay kaa caawin kartaa in aad ka fogaato ka badan-la caddeeyo oo wuxuu idin siin dhoola dabiici ah oo cad.
Luqluqasho laga yaabee in aay ka mid ah ilkaha. Waydii dhakhtarkaaga ilkaha haddii aad qabto ilkaha u adkeysan kara saamaynta isticmaalaya dawo luqluqasho.
By hadda aad ogtahay, waxaa jira wax badan oo ka mid ah fikradaha ku saabsan mowduuca jirriqsi caddeeyo. Waa in aad leedahay fikrado hadda ku saabsan sida loo helo in Xiddig lfi lagana dhoola cad oo aan dhaawac ilkaha. Hirgelinta talo ee qodobkan iyo si ammaan ah u tegi ku saabsan samaynta dhoolla dhalaal.
Posted by Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn - June 5, 2016 at 12:51 AM
Categories: Caddeeya aanu u caddayn Talooyin Ilkaha Tags: Smile White Bright, Hel A Smile Bright White, sida loo caddeeya aanu u caddayn ilkaha, ilkahayga ku caddeeya aanu u caddayn, ilkaha caddeeya, caddeeya aanu u caddayn ilkaha, Yellow daawo,